मोबाइल माया (कथा) – Chitwan Post
मोबाइल माया (कथा)
प्रकाशित मिति: शनिबार, अशोज ११, २०७६
धेरै वर्षपछि भेट्दै थिए उनीहरु । फेरि पनि भेट त्यही मेसेन्जरले जुराइदिएको थियो । शहरबाट एकाएक गायब भएको करिब ३ वर्षपछि उसले एकपटक भेटौँ न भन्दै मेसेन्जरमा मेसेज गरेको थियो आफ्नो अभिन्न मित्रलाई । बिनाकुनै कुराकानी, बिनाकुनै खोजखबर एकअर्कालाई भुल्ने स्थितिमा पुगिसकेका थिए दुवैजना । तर, एक्कासि उसले मेसेन्जरमा नयाँ आईडी बनाएर आफ्नो घनिष्ट मित्रलाई खोजेर मेसेज गरेको थियो । उता मेसेज पाउनासाथ एकछिन त मित्र पनि पत्याउनै सकिरहेको थिएन । मित्रलाई ऊ अझै सही–सलामत रहेछ भन्ने यथार्थले धेरै नै खुशी बनायो । उसको मित्रले मात्र होइन उसका सबै चिनेजानेका आफन्त अनि साथीभाइले समेत ऊ अकस्मात् गायब भएदेखि नै उसको बारेमा केही पनि अड्कल काट्न सकेका थिएनन् ।
गालाभरि झुसेदारी पालेको, टाउकोमा मैलो कपाल, जीउमा हेर्दै हप्तौँदेखि उही कपडा लगाएको र खुट्टामा पुरानो फुस्रो चप्पलमा सामुन्ने उभिएको मान्छे उही मेसेन्जरमा एकपटक भेटौँ न भन्ने मान्छे नै हो भनेर पत्याउन उसलाई करै लाग्यो । फ्रेम खुइलिएको बाक्लो पावरवाला चश्मा कानलाई समातेर अझै पनि नाकमा टक्क अडिएकै थियो उसको । हरेकपटक देख्नेबित्तिकै एकअर्कासँग हात मिलाउने उनीहरु यसपटक भने अंकमाल गर्न पुगे ग्वार्लम्मै । केहीबेर दुवैजना एक शब्द पनि नबोली अंकमाल गरिरहे । अँगालोबाट बिस्तारै छुट्टिँदै उसले आफ्नो मित्रलाई सानो स्वरमा भन्यो, ‘सरी यार, मैले तिमीहरुको खुशी र सुखले भरिपूर्ण संसारमा त्यो बेला हलचल मच्चाएर बेपत्ता भई निकै ठूलो भूल गरेँ र अहिले फेरि अर्को गल्ती गर्दैछु तँसामु आएर ।’
‘के भन्दैछस् दिपेश ? कस्तो भूल ? के गल्ती फेरि ? म त केही बुझ्न सकिरहेको छैन । विस्तारमा प्रस्टसँग भन् जे भन्नुछ । हामी फुर्सदमा छौँ आज ।’
‘हैन किरण, म हतारमै छु आज पनि । अर्को दिन बसौँला फेरि । मलाई अहिले तुरून्तै केही रकम आवश्यक परेकोले तँलाई सम्झेर आएको छु । सकिन्छ भने २० हजार नभए १० हजारमात्रै भए पनि सापटी दे अहिले मलाई । म निस्किहाल्छु पनि, पछि भेट्न आउनेछु फेरि ।’
किरणले केही नसोची तुरून्तै हुन्छ भन्दै दिपेशलाई एकैछिन पर्खिन लगायो । उसले नजिकै रहेको एटीएमबाट २० हजार निकालेर ल्यायो र दिपेशको हातमा राखिदिँदै कतै पु¥याइदिनुपर्छ कि भनेर सोध्यो । आफू एक्लै फर्कने कुरा गर्दै केही दिनमा भेट्ने वाचा गरेर फटाफट कतै नहेरी दिपेश अघि आएकै बाटोतिर लम्कियो । लामो सुस्केरा हाल्दै यता किरणले वेटरलाई एक कप तातो कफी मगायो र खल्तीबाट चुरोट निकालेर सल्कायो, अनि धूवाँ उडेकै लयमा आफूले दिपेशसँग बिताएका ती सुनौला दिनहरु सम्झन थाल्यो ।
दिपेश र किरण सधैँझैँ घुम्न निस्केका थिए त्यो शनिबार पनि । हप्ताको एकदिन शनिबार आआफ्नो काम सकाएर प्रायःजसो उनीहरु बेपर्वाह भएर घुम्न निस्कन्थे । कहिले सिनेमा हेर्न त कहिले शहरको कोलाहलबाट पर तालनजिकको रेस्टुराँमा बसेर दिनभरि बियर पिएर झुम्थे । कहिले डिस्को जान्थे त कहिले हिँड्थे खोलाको किनारैकिनार साँझ नपरेसम्म । उनीहरुको दोस्ती देखेर डाहा नगर्ने सायदै कोही थिए होलान् ! त्यस्तै कुनै एक शनिबार खोलाको किनारैकिनार हिँडेर धेरै पर पुगेपछि सफा घाँसे मैदानमा पुगेर दुवैजना कुरा गर्दै बसे । सधैँजसो अनेक विषयमा कुरा गर्थे । आफ्ना कुरा अनि आफन्तका । देशका कुरा अनि परदेशको पनि । त्यसदिन दिपेशले आफ्नै कुरा सुनाउन थाल्यो–
‘सुन् त किरण ! अब म छिट्टै यो स्कुलमा पढाउने काम छोड्दैछु । केही नयाँ त अवश्य सुरू गर्नेछु छिट्टै । तर, अहिले गरेको काम नछोडी आफू पनि अगाडि बढ्न सकिन्न, अरुले पनि खासै चासो दिँदैनन् । त्यसैले तैँले मलाई अघि बढ्न आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ बुझिस् ?’
‘भैहाल्छ नि यार ! बरू के गर्छस् भन् न । के गर्ने सोचेको छस् ?’
‘पहिले त कामै छोड्ने सोचेको छु ।’
‘हँ, के भन्दैछस् यार ? काम गर्दै पनि सोच्न सकिन्छ नि । भैराखेको यति राम्रो सरकारीसरह तलब सुबिधा पाउने जागिर छोडेर भोलि केही पनि सुरू गर्न सकिएन भने ? पहिले सोच यार केही त ।’
‘मैले सोचिसकेँ किरण, बरू तँ भन् मलाई सहयोग गर्न तयार छस् नि ?’
त्यो बेला एकै बचनमा सहयोग गरेको किरणलाई याद आयो र जिन्दगीमा आफ्नो साथ, सहयोग र हौसलाले गर्दा दिपेशले नयाँ व्यवसायमा रफ्तार लिएको पनि एकैपटक सम्झियो ।
अनि फेरि सम्झियो दिपेशको एकैछिनअघिको हालत ।
दिग्दार मान्दै किरण घर फर्कियो । घर पुगेर किरणले दिपेशको फेसबुक पेज खोज्यो, तर उसले धेरै बेरसम्म हेर्दा पनि पेज फेला पार्न सकेन । त्यसपछि उसले मेसेन्जर खोल्यो र त्यहाँ उसले दिपेशले नयाँ मेसेज पठाएको नोटिफिकेसन देख्यो । मेसेज बक्स खोल्दा दिपेशले त्यहाँ केवल एक शव्द लेखेको पायो ।
देख्नेबित्तिकै उसलाई यो त कुनै महिलाको नाम हो भन्ने ठम्याउन समय लागेन । तर, किरण फेरि रनभुल्लमा प¥यो । उसको मस्तिष्कमा अनेक प्रश्नहरुको लाइन लाग्यो । को हो नविना ? किन लेख्यो दिपेशले यो नाम ? के रहस्य जोडिएको छ यो नामसित दिपेशको ?
आखिर किरणले यो नाम दिपेशसँग जोडिएको कहिल्यै सुनेको थिएन । दिपेशले पनि कहिल्यै किरणसामु लिएको थिएन यो नाम । किरण सम्झने प्रयास गर्छ, तर कहीँकतै भेट्दैन उसको स्मृतिमा नविना । जसरी ३ वर्षअघि दिपेश अकस्मात् हराएको थियो र आज प्रकट भएको थियो अकस्मात्, त्यतिसम्म त किरणले पचाएकै थियो । तर, दिपेशले ‘नविना’ लेखेर मेसेज बक्समा पठाएपछि उसका सबै क्रियाकलापहरु रहस्यात्मक लाग्न थाले किरणलाई । किरणले पहिलेका सबै कुराहरु एक–एक गर्दै सम्झिन थाल्यो । दिपेशले धेरैभन्दा धेरै समय साहित्यिक पत्रपत्रिका र पुस्तकहरु पढ्नका लागि समय खर्चिएकोदेखि उसले फेसबुकमा लेख्ने मायाप्रीतिमा आधारित शब्दहरुले भरिएका वालहरुसम्मका कुराहरु सम्झियो किरणले । उसलाई शंका लाग्न थाल्यो, कतै नविनाकै कारण दिपेश अकस्मात् गायब भएको पो थियो कि ? अनि, अहिलेको उसको अवस्था पनि नविनाकै कारण पो निम्तिएको हो कि ? किरणले यति सोच्न भ्याउँदानभ्याउँदै फेरि अर्काे नयाँ मेसेजको नोटिफिकेसन आयो किरणको मेसेन्जरमा ।
‘हो किरण, म नविनाकै कारण यो स्थितिमा पुगेको पक्का हो । अहिले पनि उनकै निम्ति मैले तँसँग पैसा माग्नु परेको हो । म तँलाई अर्काे भेटमा सविस्तार बताऊँला । अहिले तेरो खुल्दुली मेटाउनमात्र मैले यति लेखेको छु ।’
यति पढ्दा नपढ्दै किरणको मनमा चिसो पस्यो । आखिर के भएको छ नविनालाई ? दिपेशको हालत कठै भन्नुपर्ने स्थितिमा कसरी पुग्यो ? धेरैलाई सहयोग गर्न सक्ने स्थितिबाट ऊ ३ वर्षमै कसरी अरुसामु हात फैलाउने स्थितिमा पुग्यो ?
किरणले यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ पाउन दिपेशलाई नै भेट्नेबाहेक अरु उपाय देखेन । जे उपाय ऊसँग थियो ती सबै उपयोग गरेर उसले गीता भाउजू र उहाँका छोराछोरीलाई आजसम्म सकेजति सहयोग गर्दै आएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा गीता भाउजू सम्झँदै उहाँलाई दिपेशको खबर पु¥याऊँ कि नपु¥याऊँको दोसाँधमा अल्झिएको थियो किरण । केही त निर्णय गर्नैपर्छ भन्दै किरणले मेसेन्जरमा मेसेज टाइप गर्न थाल्यो ।
‘दिपेश, म तँलाई भेट्दिनँ अहिले । पहिले तैँले गीता भाउजू र बाबुनानीलाई भेटेर सबै यथार्थ बताउनुपर्छ । उहाँहरु कुन स्थितिबाट गुज्रनुप¥यो त्यो तैँले थाहा पाउनुपर्छ । अनिमात्र म तँ कुन परिस्थितिबाट गुज्रँदैछस् त्यो जान्न सक्नेछु । अनि सुन् त, मलाई तेरो मोबाइल नम्बर मेसेन्जरमा पठा है । अघि लिनै पाइनँ ।’
टाइप त ग¥यो तर उसले सेन्ड गर्नुअघि फेरि एकपटक मनमनै सोच्यो, ‘कतै उसले यो मेसेज पढेपछि भेट्न चाहेन भने ?’
होस्, बरू रिप्लाइ नै गर्दिनँ भन्दै अघि टाइप गरेको सबै डिलिट ग¥यो । अनि हरेक बेलुकीझैँ आफ्नो नियमित काममा फर्कियो ।
उता, अस्पतालमा भने नविनाको मुटुको चाल झन्झन् अनियमित हुँदै थियो । डाक्टर तथा नर्सहरु नविनाको मुटुको चाल तथा पाठेघरको क्यान्सरले थलिएको उनको शरीरबीच सन्तुलन मिलाउँदै उपचारलाई अघि बढाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका थिए । निकै लामो छलफलपश्चात् डाक्टरहरु नविनालाई मुटुको उपचार र पाठेघरमा केमोथेरापी एकसाथ चलाउन सक्ने कुनै गुञ्जायस नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यो कुरा दिपेशलाई बोलाएर सुनाउने र अब उपरान्त सबै कुरा भगवान्कै भरोसामा रहेको बताएर अघि बढ्ने स्थितिमा पुगे । बाहिर दिपेश एक तमासले टोलाएर बसेको थियो । अकस्मात् नर्सले बोलाएको आवाजले दिपेश झसङ्ग भयो । भित्र डाक्टरहरुको क्याविनमा पुगेपछि जसै उसले डाक्टरहरुको निष्कर्ष सुन्यो त्यति नै बेला उसको मुखबाट भगवान् शिवको नाम अनायासै निस्कियो– ‘हे शिव, के गल्ती थियो मेरो ? किन मैमाथि यति ठूलो बज्रपात थोप¥यौ ? मलाई थाहा छ, यो स्थितिमा पु¥याउने तिमी नै हौ ।’
यति भन्न पाउँदा नपाउँदै नर्सले दिपेशलाई सम्झाउँदै थप कुरा गर्नुपर्छ भन्दै सँगैको अर्को क्याविनमा लिएर गइन् ।
नविना उता बेडमा पीडाले छट्पटाउँदै थिइन्, तर मुखबाट अइया, आत्था केही ननिकाली भित्रभित्रै पीडा दबाएर आँसु खसाल्दै एक्लै भक्कानिँदै थिइन् । आँशु खुशीकै थियो ।
शरीरमा यति धेरै पीडा हुँदा पनि आफूले हरपल दिपेशको साथ पाएकोमा मनमनै आनन्द मानिरहेकी थिइन् । दिपेशले सक्दो साथ दिइरहेकै थियो र स्वास्थ्यस्थिति जटिल हुँदा पनि कत्ति विचलित नभई संयमतापूर्वक हरतरहले सहयोग गरिरहेकै थियो भन्नेमा नविना ढुक्क थिई । यति नै बेला अल्लि निन्याउरो अनुहार लगाउँदै दिपेश नविनाको बेडछेउमा गएर बस्यो । उसले नविनाको शिरमा आफ्नो हात राख्यो र मनमै शिवले सहजरुपमा स्वास्थ्यलाभ प्राप्त गर्न शक्ति प्रदान गरुन् भन्दै कामना ग¥यो ।
आफ्नो शिरमा परेको दिपेशको हातको कोमल र न्यानो स्पर्शले झन् द्रविभूत भएर आँखा रसिलो बनाउँदै मायालु र सानो स्वरमा नविनाले भनिन्, ‘बूढा, के भन्नुहुँदैछ डाक्टरले मेरो स्वास्थ्यको बारेमा ? मलाई कहिले घर पठाउँछन् ? किन आज मलिन छ अनुहार हजुरको ?’
नविनाका प्रश्नहरु सुन्दै गर्दा दिपेशको मुटु जोडजोडले धड्कन थाल्यो । उसलाई के गरौँ, कसो गरौँ भयो । उसले ओठमुख सुकेजस्तो अनुभव गर्दै एकै स्वासमा बोल्यो, ‘पुकु, तँलाई तेरै शिवको झोलीमा छोडिदिएका छन् डाक्टरहरुले ।’ एकछिन नविनाको आँखामा आँखा जुधाएर हे¥यो दिपेशले र केही सम्झिएझैँ गरी कुरा राख्यो–
‘तँलाई सम्झना छ नि है, ७ वर्षअघि हामी पशुपति गएको ? अनि हामी दुईलाई पण्डित बाजेले आआफ्नो पति र पत्नीको नाम लिनुभन्दा हामीले एकअर्काको नाम लिँदा अनुहारमा खुशीका रेखाहरु फैलिएको थियो है ! भगवान् शिवको पवित्र तीर्थस्थलमा पण्डित बाजेले हामीलाई रूद्राक्षको माला पहि¥याइदिएको याद अझै आँखाअगाडि झल्झली आउँदैछ है पुकु ? हो, उनै भोलेनाथ जसले हामीलाई एक बनाए उनकै भरोसामा छोडिदिनुभएको छ डाक्टरहरुले हामीलाई फेरि ।’
‘के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर ? कहीँ डाक्टरले पनि त्यसो भन्छन् र ?’ अल्लि अत्तालिएको स्वरमा नविनाले प्रश्न राख्न नपाउँदै दिपेशले फेरि उही लयमा बोल्यो, ‘भनिसके पुकु । डाक्टरले हामीलाई अहिले भर्खर हो र चिनेको ? सबै स्थिति थाहा छ उहाँहरुलाई हाम्रो अनि झन् राम्रो ज्ञान छ तेरो स्वास्थ्यको बारेमा । उहाँहरुले स्पष्टसँग भन्नुभएको कुरा यही हो । डाक्टरहरुले त बिरामीलाई नभन्नू भन्छन्, तर मैले आजसम्म केही कुरा लुकाएको थाहा छ तँलाई ? भन् त पुकु ?’
‘छ नि, किन नहुनु ?’
‘के छ भन् त ?’, अल्लि अत्तालिएको स्वरमा दिपेशले भन्यो ।
‘यो पैसा कहाँबाट ल्याउनुभएको भनेर भन्नुभएको छ त ?’ ब्यागबाट पैसा निकालेर देखाउँदै नविनाले भनिन् ।
‘ए, यो पैसा त आज दिउँसो किरणसँग सापटी मागेर ल्याएको । तँलाई भन्नै बाँकी छ नि त्यो त पुकु । खै फुर्सद मिलेको, तैँ भन् न ।’
‘हजुरको घनिष्ठ मित्र किरण ? कहाँ भेट्नुभयो ? कसरी ? हुन त, मलाई कहाँ चिनाउनुभएको छ र ! उहाँसँग मात्र होइन कसैसँग मेरो चिनापर्ची गराउनुभएन आजसम्म ।’
‘पर्खी पुकु । म उसलाई बोलाउँछु भोलि अनि परिचय गराउँछु तँसँग ।’ नविना खुशी हुन्छिन् कि भनी सोच्दै दिपेशले भन्यो, तर नविनाले झर्किंदै भनिन्, ‘पर्दैन कसैसँग चिनाउन । उ बेला नै मैले सबैसँग मिलेर अघि बढौँ भन्दा फिटिक्कै मान्नुभएन । अहिले गाह्रोसाह्रो भएको बेला साथ सहयोग मिल्थ्यो कि ? तर खै, मेरो त भाग्यमा नै रहेनछ कसैको साथ पाउने ।’
नविनाले यति कुरा सक्दा नसक्दै दिपेशले मेसेन्जरमा किरणलाई भोलि भेट्न आउनको निम्ति मेसेज लेखेर पठाइसकेको थियो ।
‘हैन पुकु, त्यस्तो नसोच् । अब भेट्नुपर्छ छिट्टै सबैलाई, बुझिस् । अब सबैले स्वीकार्छन् हाम्रो सम्बन्धलाई ।’
‘किन ? अब मेरो जाने बेला भयो भनेर ?’
‘धत्, के भनेकी त्यस्तो ? अझै बाँच्नुछ हामीले सँगै । आजसम्म गरेको भूलको प्रायश्चित्त गरेर अघि बढ्नुछ । बुझिस् तैँले ?’
शरीरमा पीडा गडेको छ, तैपनि दिपेशको खुशीका निम्ति आँखामा खुशी ल्याउन हरदम प्रयासरत हुन्छिन् नविना । उनीहरुले गरेको त्यो मीठो भूललाई सम्झँदै अनायासै केही बोल्छिन् गाह्रो मान्दै मान्दै, ‘के भूल गरेका छौँ हामीले ? हामीले हाम्रो खुशी चाहेका थियौँ, के त्यसलाई भूल भन्न मिल्छ ? हामी सधैँ अरुको खुशीका निम्ति बाँच्यौँ त्यतिका वर्ष, तर सधैँ मनमा पीडा लिएर । कसैले बुझ्ने प्रयास गरेका थिए र हाम्रा मनका भावनाहरु ? जब हामीले हाम्रो खुशी एकअर्कामा भेट्यौँ तब न हामी एक भएका हौँ नि । होइन त बूढा ? अब किन चाहियो हामीलाई फेरि कोही ?’
‘चाहिन्छ झन् अब त पुकु । हामी फेसबुकबाट परिचय गर्दै मेसेन्जरमार्फत भेट भएर अघि बढेको हिजैजस्तो लाग्छ । त्यो बेला हामी मायामा अन्धा भएर अघि बढेका थियौँ । अघिपछि केही नहेरी, दायाँबायाँ कोही नभनी परिवार, समाज र कानुनबाट छल्दै होमिएका थियौँ मायाजालमा । तर, हामीले एकअर्काको खुशीबाहेक केही पाएनौँ । बरू, भएको पनि सबै सकियो । आफन्त, साथीभाई सबै गुमायौँ ।’
दिपेशले यति कुरा सक्न नपाउँदै नविनाको मुहार उज्यालो भएर आयो । सारा संसार त्यागेर आफ्नो मायामा हराउँदै हरदम साथ दिने दिपेशलाई सम्हाल्न खोज्दै नविना बोल्न थालिन्, ‘त्यही भएर यतिका समयपछि हजुरले किरणलाई सम्झेको बल्ल बुझेँ । हुन्छ, हुन्छ । भेट्छु म पनि किरणलाई । तपाईंजस्तै उहाँको स्वभाव पनि कति सहयोगी भावनाले भरिएको रहेछ । एकै बचनमा सहयोग लिने–दिने तपाईंहरुको व्यवहार खुब मनप¥यो मलाई । तर, उहाँलाई किन बताउनुभएन हाम्रो सम्बन्धको बारेमा त्यतिबेला ?’ अल्लि सहज हुँदै मुहारमा चमक ल्याउँदै नविनाले दिपेशलाई प्रश्न राखिन् । औषधिले काम गर्दै थियो । त्यसैले, पीडा पनि कम हुँदै थियो । नविनाले भेट्ने कुरालाई लिएर जिद्दी गरिरहिन् ।
‘भोलि भेट्न आउनू भनी बोलाको छु, उसैसँग सोध अब सबै कुरा ।’ अल्लि झर्को मान्दै यति भनेर पन्छियो दिपेश । तर, एकछिन सोचेर दिपेशले नविनालाई किरणसँग मेसेन्जरमा आफैँ कुरा गर भन्यो । नविना खुशीले दंग हुँदै दिपेशको हातबाट आफैँ मोबाइल लिएर कुरा गर्न अघि सरिन् । जोसुकै होस्, नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्न कुनै अप्ठेरो नमान्ने नविनाले मेसेन्जरमा लेख्न थालिन्–
‘नमस्कार किरणजी ! म दिपेशकी नविना । हजुरसँग भेट्ने ठूलो इच्छा भएको हुँदा आफैँ यो सन्देश लेख्दैछु । मेरो इच्छा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ । भेटको प्रतीक्षामा छु । धन्यवाद ।’
यति लेखिसकेर मेसेज सेन्ड गरिन् र दिपेशलाई मोबाइल थमाउँदै नविनाले आफू अब आराम गर्ने भन्दै भित्तातिर फर्किइन् । दिपेशले मेसेन्जरमा आएको मेसेज हेर्दै किरणले पठाएको रै’छ भन्दै खुशी हुँदै मनमनै पढ्न थाल्यो–
‘भाउजू नमस्कार ! अहिले कस्तो छ तपाईंलाई ?’ पढेपछि नविनालाई सुनाउन खोज्दै थियो, तर उसले केही नभनी जवाफ लेख्न थाल्यो–
‘नविनालाई गाह्रो हुँदैछ झन् किरण ! मुटुमा र पाठेघरमा एकैपटक समस्या देखिएकोले डाक्टरहरुले उपचारलाई रोकेका छन्, दुखाइ कम गर्ने औषधिमात्रै चलाएका छन् ।’
‘अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भाउजू ?’
‘आराम गर्दै ।’
‘खाना खायौ तिमीहरुले ?’
‘एकछिनमा खाने ।’
‘मलाई केही कुरा सोध्न मन छ दिपेश ।’
‘हुन्छ, सोध न ।’
‘हुन त, यतिबेला यस्तो कुरा सोध्नुहुन्न भन्ने थाहा छ । तर, अघि भाउजू आफैँले तेरो मेसेन्जरबाट मलाई मेसेज पठाउनुभएकोले जान्ने मन भयो । भाउजूलाई उहाँको आफ्नै फेसबुक, मेसेन्जर चलाउन दिएको छैनस् कि भनेर । तँ त त्यस्तो रोकटोक नगर्ने मान्छे ।’
के सोध्न आँट्यो किरणले भन्ने मनमा खुल्दुली चल्दै गर्दा उसले उता केही लेखिरहेको छ भन्ने देखिइरहेको थियो स्क्रिनमा । फ्याट्टै देखा परेको त्यो मेसेज पढेर दिपेशले उत्तर लेख्न थाल्यो–
‘त्यही रोकटोक गर्न नसकेकैले नै हामी जोडिन पुगेका हौँ एकअर्कासँग नछुट्टिने गरी । तँसँग म कसरी जोडिन पुगेँ, त्यो तँलाई राम्ररी थाहा छ । आफन्तहरु भन्दा पराईसँग मनैदेखि कस्सिएर जोडिन पुगेँ म फेसबुक र मेसेन्जरमार्फत, अनि मनमा सजाएँ उसैगरी सबैलाई । खै किन र कसरी सम्भव भएको हो ? जवाफ छैन मसँग । तर, जबदेखि नविना र म एकअर्काको भयौँ हामीलाई केही चाहिएन, न साथीभाइ न आफन्त, न फेसबुक न मेसेन्जर ।
बन्द गरेर टा… लेख्दालेख्दै किरणको मेसेज आयो र दिपेशले पढ्यो–
‘के लेख्न थालेको दिपेश ? म त अब सुत्ने तयारी गर्दैछु । भोलि भेटेरै कुरा गरौँ न है ?’ तर, दिपेशले मनको कुरा किरणसामु परेर पोख्न गाह्रो हुनेछ भन्ने अड्कल काट्दै लेखेरै व्यक्त गर्ने जमर्को ग¥यो र आफूले लेख्न लागेको कुरालाई निरन्तरता दियो ।
ढा… गयौँ हामी आफन्त र साथीभाइहरुले नदेख्ने, नभेट्ने ठाउँमा । केही कुरा हामीले सोचेको जस्तो भयो । अरु धेरै कुरा हामीले सोचेको जस्तो भएन पनि । मेसेन्जरमा भिडियो च्याट गर्दा हामी एकअर्काको बोली सुन्थ्यौँ, हाउभाउ हेथ्र्यौं तर एकअर्काको स्पर्श–सुखबाट हामी वञ्चित थियौँ । हामीले त्यो सुख पायौँ र सोचेजस्तो भयो त्यो हाम्रो मिलन । हरपल साथमा हुन्थ्यौँ । दुःखसुखका कुरा गथ्र्यौं । जसै हामीबीच अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा सुरू भयो तब हामीले सोचेको जस्तो केही हुने भएन भन्ने जान्यौँ ।
यति लेखिसक्दा नसक्दै दिपेशले बेडमा सुतिरहेकी नविनाले सारै दुख्यो भनेको सुन्यो र उठ्न लागेको देख्यो । हत्तपत्त मोबाइल टेबलमा राखेर ऊ नविनालाई समाउन गयो । नविनाले आफूलाई पिसाब फेर्न जानुपर्ने भएको बताइन्, अनि दिपेशले समाएर उनलाई करिडोर हुँदै अर्को छेउमा रहेको बाथरूमतर्फ डो¥याएर लग्यो । फर्केर आएपछि नविनालाई आराम गर भनेर बसायो अनि फेरि अघि लेख्दै गरेको सम्झेर मोबाइल राखेकोतिर अघि बढ्यो । तर, अघि राखेको ठाउँमा उसले मोबाइल देखेन । एकैछिनमा मोबाइल हराएकोमा उसलाई के गरुँ कसो गरुँ भयो । कसलाई भनूँ भयो । वरपरको बेडमा अरु कोही बिरामीहरु थिएनन् । को आयो कताबाट पसेर मोबाइल लग्यो ! उसले कसैलाई देखेन । किरणलाई मनको कुरा बताउन केही लेख्दै गरेको सम्झियो । सामान्य मूल्यबराबरको मोबाइलबाहेक ऊसँग केही बाँकी थिएन । त्यसले पनि साथ छोड्यो भन्ने लाग्यो दिपेशलाई । उसले नविनालाई सिरानीमुनि रहेको ब्याग हेर्न भन्यो । त्यसभित्रको रकम भने सहीसलामत रहेकोमा हल्का राहत महसुस गर्दै मोबाइल चोरी भएको कुरा नविनालाई बतायो । नविनाले एकै वाक्यमात्रै बोलिन्, ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ भन्थे हो रहेछ ।’ खाना खाने अनि आराम गर्ने अब भन्दै दिपेश अस्पतालको क्यान्टिनतिर खाना लिन गयो ।
भोलिपल्ट बिहान दिपेश र नविनालाई भेट्न पाउने कुराले किरण केही उत्साहित भएको थियो । पहिले फोन गरेर बुझ्छु भन्दै नम्बर डायल ग¥यो । तर, मोबाइल स्वीच अफ भएको थाहा पाएपछि एकछिन त के गरुँ कसो गरुँ नभएको हैन उसलाई । हतास नभई उसले अस्पताल पुगेपछि भेटिहालिन्छ नि भन्दै आफैँलाई सान्त्वना दियो र निस्कियो घरबाट । अस्पताल पुगेपछि सोधपुछ कक्षमा पुगेर उसले सोध्यो, ‘यहाँ नविना नाम गरेको बिरामी भर्ना भएर बस्नुभएको छ । कति बेड नं मा हुनुहुन्छ होला ?’ भित्रबाट प्रतिप्रश्न आयो, ‘नविनाको थर के होला ?’ कम्प्युटरमा खोजिसकेपछि भित्रबाट दिदीले बोलेको किरणले सुन्यो, ‘खै, यता त नविना नाम गरेको बिरामी नै रेकर्डमा देखिँदैन त भाइ !’ अचम्म मान्दै किरणले दिपेशको नाम लिँदै भन्यो, ‘दिदी ! नविनाको श्रीमान्को नामचाहिँ दिपेश हो, दिपेश सिंह । नविनाको त थर थाहा भएन । एकपटक खोजदिनू न फेरि । भेट्नैपर्ने छ उहाँहरुलाई ।’
फेरि छैन भन्ने जवाफ नै आयो भित्रबाट ।
किरण बेचैन भयो । त्यति ठूलो अस्पतालमा उनीहरुलाई कहाँ खोजूँ कता गएर भेटूँ भयो । खल्तीबाट मोबाइल झिकेर उसले फेरि त्यही नम्बरमा डायल ग¥यो । टेलिकमकी उनै म्याडमले माफी मागिन् फेरि पनि । किरण निराश भएर त्यहीँ रहेको मेचमा टोलाएर बस्यो एकछिन । कतै भेटिपो हालिन्छ कि भन्दै हिँड्यो यताउता नजर डुलाउँदै । ऊ गाइनोकोलोजी वार्ड, इन्टरनल मेडिसिन वार्डदेखि प्रायः सबै वार्डतिर गएर हे¥यो । कतै भेटेन उसले दिपेश र नविनालाई । केही उपाय नलागेपछि हार मानेर फर्कियो किरण । जिन्दगीमा यति निराश कहिल्यै भएको थिएन ऊ ।
ऊमात्रै हैन नविना र दिपेश पनि यतिविघ्न निराश कहिल्यै भएका थिएनन् । त्यही निराशाको बीच नै दुवैले आशाको केन्द्र मानेको शिव भगवान्को मन्दिर रहेको पशुपति मन्दिरमा गएर उनैको शरणमा पर्ने निर्णय गरे त्यही रात । चिया पिउने बेलामा किरण आउने भनेको कुरा सम्झे दुवैले । तर, मोबाइल हराएकोले भेट हुने सम्भावना कम रहेको कुरा ग¥यो दिपेशले । तैपनि, बिहान १० बजेपछि अस्पतालबाट सबै प्रक्रिया पु¥याएर डिस्चार्ज नभएसम्म कसो भेट नहोला त भन्दै यताउति हेर्दै बस्यो दिपेश । नविना भने ३ वर्षपछि दिपेशको कोही नजिकको मान्छे भेट्ने आशा अझै मनमा रहिरहेकोले कतै भाउजू नमस्ते भन्दै किरण आफ्नासामु आउने कल्पना गर्दै थिइन् । दिपेशले डाक्टरहरुलाई भेटेर फर्कियो । आफूहरु अब भगवान्कै भरोसामा बस्ने र यदि ठीक भएमा अवश्य भेट्न आउने वाचा गरेर आएको कुरा दिपेशले नविनालाई सुनायो । त्यतिञ्जेलसम्म पनि किरण आइनपुगेकोले ऊ आउने आशा कम हुँदै गएझैँ लाग्यो दुवैलाई । दुवैले एकअर्कालाई हेराहेर गरे र उत्तर पाएझैँ मानेर अघि बढे ।
उता, किरणले दिपेश र नविनालाई भेट्न नपाएकोले मेसेन्जरमा भए पनि मेसेज पठाउने सोचेर लेख्न थाल्यो–
‘तेरो मोबाइल स्वीच अफ छ त दिपेश ! म अस्पताल गएको थिएँ, तर नविना नाम गरेको कोही पनि बिरामी रेकर्डमा नरहेको जानकारी पाएँ अस्पतालबाट । खोजेँ मैले धेरैतिर, कतै भेटिहालिन्छ कि भनेर । तर, भेट भएन हाम्रो । भेट भएमा अवश्य सहयोग गर्नेछु । अहिले मेसेजको रिप्लाइ पर्खनुसिवाय अरु उपाय केही छैन मसँग ।’
मनकारी मित्र दिपेशसँग हिजो भेटेको बेलामै धेरै कुरा बुझ्ने कोसिस गरेकै थियो किरणले । तर, परिस्थिति अप्ठेरो नै होला भनेर सहजै जान दिएको थियो उसलाई । अहिले आएर यस्तो मोड आउला भनेर उसले चिताएकै थिएन । दिपेश र नविनाले पनि चिताएका थिएनन् जिन्दगीको यो अति नै घुमाउरो मोडमा कुनै दिन आइपुगिएला भनेर । सामाजिक सञ्जालले जुराइदिएको भेट हो, कुनै दिन अवश्य पनि फेरि भेट्टाउला भन्दै मोबाइल मायालाई मनमा सम्हाल्दै किरण, दिपेश र नविना आआफ्नै गतिमा लाचार भएर जिन्दगी अघि बढाउँदैछन्…..।
दसैँ र आमा (कविता)
१७ जनाले गरे नेत्रदान गर्ने प्रतिबद्धता
कृति समीक्षा ‘मित्रताको आकाश’मा रूमल्लिँदा
बाह्र वर्षमा ‘कर्णाली ममता समाज’को फर्किएको खोलो (अनुभूति)
अमानवीयता (आजको कविता)
अनुहार पुस्तिका (कविता)
थोपलखोला किनारका बस्ती जोखिममा
गैँडाकोटबाट दुई दिनदेखि आमा छोरा बेपत्ता
कावासोतीसहित नवलपुरको ६ स्थानीय तह कोरोनामुक्त
सोमबार थपिए ३३८ संक्रमित, १४० जना निको भए